सिरुबारी होमस्टे कसरी पुग्ने ? - Naya Patrika
सिरुबारी होमस्टे कसरी पुग्ने ?
स्याङ्जाको सिरुबारी गाउँ समुद्री सतहबाट एक हजार सात सय मिटर उचाइमा छ । यो सुन्दर गाउँमा गुरुङ समुदायको बसोवास रहेको छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक पोखराबाट केही समय गाडीमा हुइँकिएपछि पैदल हिँडेर पुग्न सकिन्छ, सिरुबारी ।
पैदलयात्रा केही अप्ठ्यारो भए पनि पदमार्ग राम्रोसँग निर्माण गरिएको छ । गाडीबाट ओर्लिएपछि रमाउँदै हिँड्दा तीन घन्टामा सिरुबारी पुगिन्छ । यो यात्रा छोटो र सजिलो मान्न सकिन्छ ।
हिउँद होस् कि बर्खा, वसन्त होस् कि शिशिर । सिरुबारी जुनसुकै पनि मौसममा घुम्न उपयुक्त ठाउँ हो । यहाँको मौसम साँच्चै अद्वितीय छ । यहाँको बसाइ अझ सामान्य र आरामदायी हुन्छ ।
यात्रासूची कस्तो हुन्छ ?
पहिलो दिन पोखरा पुग्नुस् । त्यहाँ घुम्नुस् । फोवातालमा डुंगा चढ्नुस् । अनि होटेलमा आराम गर्नुस् ।
दोस्रो दिनमा बिहान उठेर सिरुबारीतिर प्रस्थान गर्नुस् । त्यसो हुँदा तपाईं बाढ्खोला, दराउ हुँदै जानुपर्छ । तपाईं दिउँसोको खाना र स्वागत कार्यक्रममा सहभागी हुन सिरुबारी नै पुग्नुहुन्छ ।
तेस्रो दिनभरि सिरुबारी घुम्नुस् । त्यहाँका मानिस भेट्नुस् । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दासँगै मिलेर खाना खानुस् र होमस्टेमा बस्नुस् । चौथो दिन त्यहाँको मैदान खर्क र ठुम्रोमा सर्ट हाइकिङ जान सकिन्छ । त्यहाँबाट सूर्योदय हेरेर दिनभर मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
पाँचौँ दिन त्यहाँको गुम्बाबाट बिदाइ भएर कार्किनेटा, सेती दोभान, नौडाँडा हुँदै पोखरा फर्कन सकिन्छ । त्यसपछि पोखरामा नै रमाउने वा अन्यत्र कतै घुम्ने अथवा काठमाडौं फर्कने भन्ने कुरो तपाईंको इच्छामा भर पर्छ ।
के छ आकर्षण ?
यो गाउँमा पाइने फरक प्रकारका फूलहरू र गाउँवरिपरिको हरियाली महनमोहक छ । प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण पनि सिरुबारी गाउँ घुम्नैपर्ने ठाउँमा पर्छ । सिरुबारीको महत्वपूर्ण आकर्षण भनेको यहाँका गुरुङ समुदाय र उनीहरूको संस्कृति पनि हो ।
गुरुङ समुदायको आकर्षक संस्कृति र परम्परामा उनीहरूको आत्मीय आतिथ्यता थपिएपछि यो ठाउँमा फर्की–फर्की जाउँजस्तो लाग्नु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन । यहाँका गुरुङ समुदायले देखाउने सांस्कृतिक कार्यक्रम मानसपटलमा बसिरहनेछ ।
#गुरुङ समुदाय #सिरुबारी #होमस्टे